बजाजको मोटरसाइकल खरिदमा धनुषाका साफीले जिते १० लाख इनाम
आज : वि.सं २०७८ बैशाख ३१ शुक्रबार
बजाज शुन्य अफरमा शुरुमा १ र पछि जतिवटा शुन्य थपिन्छ त्यतिको इनाम दिने गरेको जनाइएको छ ।
बेलुकी ६:२५ बजे
न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । बजाज कम्पनीको मोटरसाइकल खरिद गर्दा धनुषाका एक जना भाग्यशालीले १० लाख रुपैया स्क्रेचमा पाएको छ ।
धनुषा जिल्लाको कमला नगरपालिका वडा नम्बर ३ (साबिक वडा नं. ६ लगमा बजार) बस्ने रोशन साफीले बजाज कम्पनीका पल्सर १५० सीसीको मोटरसाइकल खरिद गर्दा १० लाख रुपैयाँ हात पारेका छन् ।
जनकपुरधामको मुजेलिया स्थित रहेको ओम अटो मोवाइल्समा बजाज शुन्य अफर अन्र्तगत सवै भन्दा कम १० हजार र सवै भन्दा बढी १० लाखको इनाम राखिएको छ ।
साफीलाई वुधवार एक कार्यक्रम विच ओम अटो मोवाइल्समा एक कार्यक्रम विच १० लाखको चेक हस्तान्तरण गरिएको थियो । बजाज शुन्य अफरमा शुरुमा १ र पछि जतिवटा शुन्य थपिन्छ त्यतिको इनाम दिने गरेको जनाइएको छ ।
बजाज कम्पनीको शुन्य अफर अहिले मोटरसाइकल पारखिकोलागि एक दम्मै लाभदायक रहेको र मोटरसाइकलका पारखीहरु पनि अहिले उत्साहित भएर खरिद गरि रहेका छन् ।
शुन्य अफर लागु भएपछि अहिले सम्म ओम अटो मोवाइल्सवाट करिव ४ सय भन्दा बढी मोटरसाइकल विक्री भई सकेको जनाइएको छ । चैत १ गते देखि शुन्य अफर चालु भएको सञ्चालकले जनाएको छ ।
साढे ८२ लाख रुपैयाँ सहित चार युवक पक्राउ
न्यूज ब्यूरो, वीरगँज । प्रदेश २ को आर्थिक नगरी वीरगँजबाट ८२ लाख ५० हजार रुपैयाँ सहित प्रहरीले हुण्डी कारोवारीहरुलाई पक्राउ गरेको छ । बीरगँज महानगरपालिका वडा नं. ३ आदर्सनगर पानीटँकीस्थितबाट प्रहरीले
न्यूज ब्यूरो, वीरगँज । प्रदेश २ को आर्थिक नगरी वीरगँजबाट ८२ लाख ५० हजार रुपैयाँ सहित प्रहरीले हुण्डी कारोवारीहरुलाई पक्राउ गरेको छ ।
बीरगँज महानगरपालिका वडा नं. ३ आदर्सनगर पानीटँकीस्थितबाट प्रहरीले सो रकम सहित चार जनालाई पक्राउ गरेको हो । उनीहरुको साथबाट ८२ लाख ५० हजार रुपैयाँ फेला परेको बताइएको छ ।
सूचना परिचालन र प्रहरी कारवाहीको सिलसिलामा भारत विहार जिल्ला मोतिहारी पूर्वी चम्पारण, थाना रक्सौल, वडा नं.१८ स्थायी ठेगाना भई जिल्ला पर्सा बीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नं. ३ आदर्शनगर, पानीटंकीमा डेरा गरी बस्ने वर्ष २७ को विकास कुमार सहित अन्य ३ जनलाई पक्राउ गरेको हो ।
प्रहरीका अनुसार मँगलबार दिउँसो करिब १ बजेको समयमा जिल्ला बारा महागढीमाई नगरपालिका वडा नं. ४ बस्ने वर्ष १८ को कलामुद्दिन अन्सारीलाई पुरानो बसपार्क, आदर्शनगर चोकमा कालो झोला बोकी हिँडिरहेको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिएको हो ।
उनले बोकेको झोला जाँच गर्दा झोलाभित्र नेपाली रू. २५ लाख फेला परेको र साथै विकास कुमारको डेरामा रीतपूर्वक खानतलासी गर्दा अन्य दुई वटा कालो ब्याग र दुई वटा हेल्मेटभित्र लुकाइछिपाई राखिएको ५७ लाख लाख ५० हजार थप फेला परेको थियो ।
सो रकमसहित चारै अन्य २ जना पक्राउ परेको जनाइएको छ । पक्राउ पर्नेहरुमा विकास कुमार र कलामुदिन अन्सारी सहित गुडु कुमार र साहित गुप्ता पनि रहेका छन् । उनीहरुलाई अवैध वित्तीय कारोवार (हुण्डी) गरिरहेको भन्ने सूचना प्राप्त सूचनाको आधारमा पक्राउ गरिएको थियो ।
उनीहरुका साथै ना ८प. ४८९७ नम्बरको डिस्कभर मोटरसाइकल समेत पक्राउ गरि कारवाही प्रक्रिया अगाडी बढाएको हो । उनीहरुलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ बिरूद्वको कसूरमा अनुसन्धान अगाडि बढाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।
बाघसँग युवकको आधा घण्टा लडाई, बाघलाई मारेर आफैं अस्पताल भर्ना !
जनकपुर प्रादेशिक अस्पतालमा कोभिड विरामीको मृत्यूपछि कर्मचारीमाथि हातपात, भेन्टिलेटर तोडफोड
सिरहाको लहानमा गाई काटेपछि स्थानीयहरु तातिए, खातुन र किस्मत पक्राउ
महामारीमा पनि अक्सिमिटरको कालोबजारी गर्ने तिबारी पक्राउ
भर्खरै सँचालनमा आएको मिर्चैयाको 'सूर्या सिमेन्ट' फ्याक्ट्रीका मजदुर र स्थानीय आन्दोलनमा
जनकपुरको सँकटमोचन मन्दिरका पूजारीको मृत्यू
सौरभ साह - बीरगँज,पर्सा | 9802934177